नेपालमा संसारकै दुर्लभ सर्प भेटिएको केही समयमा नै स्थानीयले सिध्याइदिएपछि ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमा संसारकै दुर्लभ सर्प भेटिएको केही समयमा नै स्थानीयले सिध्याइदिएपछि !
नेपालमा संसारकै दुर्लभ सर्प भेटिएको केही समयमा नै स्थानीयले सिध्याइदिएपछि !
काठमाडौं । नेपालमा एक दुर्लभ सर्प फेला परेको छ । दाङमा पहिलो पटक फेला परेको अर्नेट फ्लाइङ स्नेकलाई स्थानीयले सिध्याएका छन् । केही दिन पहिले घोराही उपमहानगरपालिका–२ सुर्केडाँगीमा फेला परेको उक्त सर्प स्थानीयले सिध्याएका हुन् । विगत तीन वर्षदेखि सर्पको उद्धार गर्दै आएका घोराहीका वसन्त सुवेदीले आफू पुग्दा जिल्लामा पहिलो पटक फेला परेको अर्नेट फ्लाईङ स्नेकलाई स्थानीयले सिध्याइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
सर्पको लम्बाइ झन्डै डेढ मिटरसम्म लामो रहेको थियो । अंग्रेजीमा ‘अर्नेट फ्लाइङ स्नेक’ भनिने यो सर्प एउटा रूखबाट अर्को रूखमा सहजै हाम फालेरै जाने हुँदा यसलाई सर्वसाधारणले उड्ने सर्प पनि भन्ने गरेका छन् ।जानकारी अनुसार यो सर्पले सोझै बच्चा जन्माउँने गर्दछ । अन्यथा अधिकांश सर्पले सन्तान उत्पादनका लागि अण्डा पार्छन् । हेर्दा निकै सुन्दर देखिने यो सर्प तराईका वन जंगल तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । पहाडको तुलनामा यो सर्प तराईमा धेरै पाइन्छ ।
अनौंठो सर्प देखेपछि कतिपय स्थानीयले भगवान डुमेनी सर्प भनेर पूजा गर्नुपर्ने राय पनि राखेको खुल्न आएको छ । सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार सर्प घरको पर्खालमा चढ्न थालेपछि त्यसले मान्छेलाई क्षति पुर्याउँछ भन्ने ठानेर स्थानीयले सिध्याएका हुन् ।सुर्केडाँगीका एकजनाले उनलाई अनौंठो सर्प देखिएको भनेर उद्धारको लागि फोन गरेर बोलाएको भए पनि आफू बिहान ११ बजेतिर पुग्दा नबुझेर स्थानीयले सर्प सिध्याइसकेको जानकारी दिएका छन् । उनी जाँदा उक्त सर्प मृत अवस्थामा फेला परेको थियो । यो सर्प विश्वकै अनौठो प्रजातिमा पर्छ । किनकी यो सर्पले बच्चा जन्माउँछ । अरुले अण्डा पारेर अण्डाबाट बच्चा बनाएँछन् ।
जनताले टेरेनन् भन्दै फेरी लकडाउनको तयारीमा सरकार, यस्तो हुनेछ अबको लकडाउन
नेपालमै पहिलो पटक चितवन मेडिकल कलेजमा कृत्रिम ग´र्भाधानबाट जन्मियो यस्तो बच्चा